La Yaabka Aduunka: Wiil 17 jir oo mid ka mid ah Kalyihiisa u iibsadey si uu helo Iphone – SBC
La Yaabka Aduunka: Wiil 17 jir oo mid ka mid ah Kalyihiisa u iibsadey si uu helo Iphone
Wiil yar oo u dhashay wadanka Shiinaha ayaa ku dhaqaaqay talaabo halis ah oo si weyn dadka wadankaasi ula yaabeen una cambaareeyeen, ka dib markii uu iibsadey mid ka mid ah kelyihiisa si uu u helo lacag uu gato cumputer lat top-ka casriga ah ee lagu magacaabo iPod2.
Xiao Zheng oo 17 sano jir ah ayaa sheegay inaanu awood u laheyn uu gato noocyada casriga ah ee cumputarada, taasi oo ah calaamad tujaarnimo wadanka Shiinaha.
Laakiin Zheng wuxuu arkay xayeysiis lacag loogu ogol yahay qofkii caafimaad qaba oo doonaya in uu bixiyo mid ka mid ah keliyihiisa, waxaana uu go’aansadey in uu ku dhaqaaqo talaabadaasi isagoo ka qariyey hooyadiis.
Wiilkan ayaa u sheegay Telefsihinka Shenzhen ee ku yaal gobolka Koonfureed ee Guangdong ee dalka Shiinaha “Waxaan doonayey inaan helo iPod2, laakiin lacag ma haysan waxaana sidaasi sida aan u go’aansadey inaan iska iibiyo mid ka mid ah kelyaheyga”.
“Mudo markii aan ku jirey Internet-ka waxaan helay xayeysiis ay wakaaladi ku doonayso kelyo beec ah sidaasi ayaan u qaatey arintan, waxaan u safrey magaalada Chenzhou ee gobolka Hunan halkaasi oo keli la igaga saarey Isbitaal gaar ah” ayuu yiri wiilkan.
Dhacdadan oo dhacdey 28-kii April ayaa la sheegay in wiillan kelidiisii laga siiyey lacag dhan 2890 doolar, iyadoo hawshani sooctey mudo sadex maalmood ah.
Wargeyska Daily China ayaa qorey in markii wiilkan lacagtii uu soo qaatey uu horey ka gatey Ipod2 iyo mobile-ka qaaliga ah ee iPhone laakiin markii uu ku soo noqdey gurigooda waxaa arinkaasi shaki xoogan ka muujisay hooyadiis oo la yaabtey halka uu ka keenay alaabtan qaaliga ah wiilkeeda.
ipod2 oo ah computer casri ah oo aad u fudud una adeegyo badan
“Waxaan doonayeyey inaan ogaado sida uu ku helay lacagtan faraha badan, laakiin mudo ka dib ayuu ii sheegay in uu iibsadey mid ka mid ah kelyihiisa” ayey tiri wiilkan hooyadiis.
Booliiska ayaa markaasi ka dib loo wacay, balse ma aanay heli karin sadexdii nin ee qorsheysay qaliinka wiilkan ee kelida lagaga iibsadey.